Efa ao amin'ny Channel Channel anao ve ny Twitter? | Martech Zone
Alatsinainy Oktobra 12, 2009 Alarobia, Febroary 10, 2016 Douglas Karr
Raha miantso ny orinasanao amin'ny fitoriana na fanontaniako aho dia ny solontenan'ny mpanjifanao ihany no mihaino ahy. Raha manontany amin'ny Twitter anefa aho dia maheno ahy ireo mpanaraka ahy 8,000… ary ireo izay mamerina amin'ny laoniny dia mampivelatra ny mpihaino ho ao anaty tambajotran'izy ireo. Ny Twitter dia manjary lasa antony demokratika ho an'ireo mpanjifa maniry valiny.
Mihaino Twitter ve ianao? Tsy lamaody na orinasa ny Twitter… fampahalalam-baovao mahomby. Tsy mila mandray anjara ianao (hafa noho ny mamaly), saingy tokony tsy hiraharaha izany fantsona manan-danja izany ianao.
Vao haingana i Salesforce dia nanangana fampidirana Twitter ao amin'ny cloud service (manana fidirana haino aman-jery sosialy hafa koa). Fantatrao ve fa afaka manara-maso ianao Twitter miaraka amin'ny Cloud Cloud an'ny Salesforce, manitatra ny ezaka ataon'ny mpanjifanao?
Tongasoa eto amin'ny tontolon'ny mifandray, foana, be hevitra, amin'ny mpanjifa mifindra. Ity dia mpanjifa iray izay mahatakatra fa manana fahefana izy ireo izao. Manantena mihoatra noho ny vokatra na serivisy avy aminao fotsiny izy ireo izao. Manantena fifandraisana iray izay mitovy fitoviana izy ireo. Manantena ny ho eo afovoan'ny tontolonao izy ireo. Ary mila apetrakao ao izy ireo. Mila tonga orinasa mpanjifa ianao.
Farafaharatsiny mba hamporisihako hanana feed avy amin'ny a Fikarohana ao amin'ny Twitter.
Tags: Serivisy ho an'ny mpanjifaradian6salesforceTwitterfampidirana twitter
13 Okt 2009 amin'ny 3:07 PM
Tsy fanontaniana amin'ny antony intsony ny media sosialy fa ahoana. Misaotra anao nanolotra anay ho fitaovana fihainoana sy fandraisana andraikitra.
Community Manager ao amin'ny Radian6